History - chimwe chezvinhu zvinokosha zvokuyamura anoranga. Kudzidza hakusi kukosha dzidzo chete, uye mazano kukosha. Nyaya nhoroondo - nhoroondo yevanhu uye upenyu ino nguva, mitemo evanhu upenyu uye ukama, chesamende siyana Implementation yavo uye kuchinja kuti inini pane vamwe spatial nezvenyama zvikamu. Zviri munhau sezvo kurangwa nesayenzi - kudzidza nhoroondo urongwa, kunoratidzwa kuburikidza nokudzidza nhoroondo Zvivako uye kumwewo. The zvichiguma mashoko anopa mashoko pamusoro upfumi basa, policies vavatorwa mudzimba pamusoro vakadzidza ehurumende uye vagari vemo, zviitiko, magariro upenyu, basa munhu evanhu. Saka, nyaya nesayenzi, pfungwa yakafara uye chinoumbwa nezvinhu zvakawanda, achitaura nhoroondo imwe ukoshi uye musimboti.
By kudzidza upenyu vanhu kubva kumaonero akasiyana-siyana, nhoroondo sezvo kurangwa nesayenzi rakakamurwa mapazi akawanda, rimwe nerimwe, achiva akazvimiririra, vari chokuita vose vamwe. Kusiyanisa nhoroondo zvoupfumi, zvematongerwo enyika, ehurumende, nhoroondo mamiriro uye mutemo, nhoroondo, tsika nemagariro, etc. Nyaya Sayenzi ethnography, sezvo chokuita nhoroondo - upenyu uye tsika vanhu. Uye Archaeology inoongorora nhoroondo imwe zvinyorwa zvekare - maturusi, housewares, zvishongo nezvimwewo, uyewo anoshanda dzakazara nhoroondo zvivako - kuvigwa chikonzero, nemisha, pfuma.
Zvichienderana Latitude yacho chinhu riri kudzidzwa, chingava nyaya nesayenzi uye nhoroondo yose yenyika, kureva, World History kana nokudenga. Kana nhoroondo imwe kondinendi chete - America, Africa, Asia. Mune zvimwe rakamanikana specialization - nhoroondo imwe nyika uye vanhu kana boka marudzi (nhoroondo Russia, nhoroondo yacho USSR).
Kuwedzera kune mukuru, munyika masayendisiti vakasarudza govera inonzi ebetsero zvenhoroondo anoranga. Nyaya nesayenzi kuti rakatetepa hunhu, zvinonzi akadzidza zvizere, zvakawanda, asi anopa mukana kunzwisisa uye kuonga nani nhoroondo mutoo yose:
Chronology riri kuna kudzidza dzakasiyana bhuku nguva enyika;
nokuti zvekare dzinonakidza tsamba zvekare, zvinyorwa nezvimwe zvivako zviri eras siyana akanyorwa;
diplomatics yaita zvinyorwa;
numismatics nokuti nyaya nhoroondo - Medals, mari uye zvimwe currencies;
Regional Studies tichiita kudzidza munhoroondo munhu nzvimbo, ndima, kumatunhu, uye nezvimwewo.
heraldry kufarira maoko mhuri uye genera yose, maguta, nyika.
vanotongwa chikamu kupfuura vamwe vane bhuku ukoshi, idzo nyaya nesayenzi - zvenhoroondo dzekare uye historiography, kudzidza, kuongorora uye ichirondedzera mafungiro, pfungwa, pfungwa, vanyori chenhau mabasa, nyanzvi uye kare, uyewo mitemo nhoroondo sezvo zivo yesayenzi.
History ndohwaJehovha sayenzi yekare piringisha pamwe chaiko, ezvoupfumi pfungwa, uzivi, zvepfungwa, zvoupfumi dzidziso, zvemutauro, uye vamwe vakawanda. Pamharadzano dzenzira kuti anoranga wandei chero dzakaitika jogirafi, nhoroondo mabhuku, nziyo, etc.
Political sainzi kana sayenzi enyika - mumwe zvakakura kuitika munhau. Nyaya sayenzi enyika vanoumba zvakasiyana-siyana pezvakaitwa uye mananara kubva zvoupenyu mitemo, mitemo uye nzira kukura kwavo uye inotarisirwa migumisiro azvaiitwa:
political pfungwa, nhoroondo chidzoke uye kukura enyika pfungwa uye nedzidziso;
simba, akasiyana-siyana kuratidzwa uye siyana ehurumende, zvematongerwo enyika pamwe huru mashandiro hwesimba - ehurumende;
vanotongwa enyika ukama uye ukama - veruzhinji, makirasi munzanga uye vamwe vomunharaunda, siyana nemasangano enyika;
enyika hana vakawanda vavo enyika tsika, zvematongerwo chikuru nhungamiro;
dzakawanda enyika pezvakaitwa uye mitemo dzakawanda sezvo vakadaro.
Saka, kudzidza nhoroondo, nzanga anodzidza kufunga nhoroondo Mapato, ona kukura kwayo, kupa kwakarurama yera siyana evanhu pezvakaitwa uye mananara noruremekedzo kuti kare uye kufanotaura nzira zviitiko zveramangwana.
The nharo pamusoro chii murume wakasiyana nemhuka
Fulminate kuti nemekiyuri
Cytology - ichi ndechimwe vaizotibata zvikuru matavi ruzivo kwevanhu
The wevanotungamirira dambudziko munyika: nzira mberi
Analysis kuti ziso mikana yakawanda yokukurudzira inozadziswa receptors: vanonakidza kupfuura zvinhu izvi
Unoziva here akazogadzira kombiyuta?
Car Vagabond Baja: Wongororo
Chii symmetry masvomhu? Definition uye Mienzaniso
How kunyora bhuku. Danho nedanho mirayiridzo oparesheni
US mari paper madhora uye mari
"Case" yose upenyu, kana bonhora sei nengozi?
Accrual kuti chipatara
The mahormone of hypothalamus uye pituitary
Kvass Starominsky: wongororo uye tsananguro
How kuti zvinonaka Pita chingwa makazara gakanje zvimiti?
Mitswe pakati kugokora, mifananidzo, zviratidzo, kurapwa, vapore